ယောက်ျားများကို ထိန်းနည်း ၄ နည်းရှိသည်။
၁. အစားကောင်း များဖြင့် ထိန်းနည်း (အစာအိမ်ကို ထိန်းနည်း)
၁. အစားကောင်းများဖြင့် ထိန်းနည်း (အစာအိမ်ကို ထိန်းနည်း)
နံပါတ်တစ်နည်းကိုအသုံးပြုသော မိန်းကလေးသည် သဘောထား အဖြူစင်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းကလေးမျိုးကို အိမ်ထောင်ဖက် အဖြစ်ရွေးချယ်သောယောက်ျားသည် ကံကောင်းသောသူဖြစ်သည်။ သူမသည် သူချစ်သောယောက်ျားကို လွတ်လပ်ခွင့် ပေးထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူမအတွက် တစ်ခုသောမျှော်လင့်ချက်မှာ မိမိ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ထားသော အရသာရှိရှိ ထမင်းကောင်းဟင်းလျှာများကို မိမိယောက်ျား အချိန်မှန်မှန်ပြန်လာစားရန်သာဖြစ်သည်။
နံပါတ်လေးနည်း ကိုအသုံးပြုသော မိန်းကလေးသည် အသိဉာဏ်ပညာရှိသော သူဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းကလေးမျိုးသည် လောကကြီးသည် မမြဲခြင်းတရား ပိုင်ဆိုင် ထားသည်ကို သေချာနားလည် ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားများကို အစားကောင်းဖြင့်ဖြစ်စေ ၊ ငွေကြေးဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူကိုဖြစ်စေ အရာရာကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး မိမိကိုယ်ကိုယ် မထိန်းနိုင်ပါက လူဖြစ်ရသည်မှာ အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့လှသည်ဟု ယုံကြည်ထား သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင် ရမည်။ တစ်ပါးသူ အတွက် အသက်ရှင်နေခြင်း မဟုတ်ပဲ မိမိဘာသာ ရပ်တည်နိုင်သော၊ ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာနိုင်သော မိန်းကလေးဖြစ် ရမည်။ အရာရာကိုဆင်ခြင်တုံတရားဖြင့် ခွင့်လွှတ်နေတတ်ရမည်။ ထိုမိန်းကလေးမျိုး၏ စိတ်သည် အမြဲတည်ငြိမ်နေသည်။ မိမိယောက်ျားသည် မည်မျှပင်ချမ်းသာ ပါစေ ထိုစည်းစိမ်တွင် သူယစ်မူး မနေပေ၊ မှီခိုမနေပေ။ မိမိလုပ်နိုင်သမျှ၊ ရှာနိုင်သမျှကို လုပ်ရင်းဘဝကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြစ် ကုန်လွန်စေချင်သော မိန်းကလေး မျိုးဖြစ်သည်။
မိမိကိုယ်ကိုယ် အသိတရားဖြင့် ထိန်းချုပ် နိုင်သော မိန်းကလေးမျိုးသည် မိမိယောက်ျားက ကိုယ့်ကိုထားခဲ့၊ ချစ်သူက ထားခဲ့ပါစေ၊ ဖြစ်လာသမျှကို ပြုံးပြုံးလေးနှင့် ရင်ဆိုင်နိုင်သော မိန်းကလေးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သူမ၏အသက်သည် ယောက်ျားအတွက်၊ ချစ်သူအတွက်မဟုတ်၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် အတွက်သာဖြစ်သည်ဟု နားလည်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်သည် ဘယ်လို မိန်းကလေးမျိုးလဲ သင်သည် ဘယ်လိုမိန်း ကလေးမျိုးကို လက်ထပ်ယူချင် ပါသလဲ။
Written by Nine Nine Sanay
Posted by Alex Aung at 10:54 PM